Mareykanka Oo beeniyey iney Dad Shacab Diyaaradihiisu Ku Laayeen Soomaaliya: – Saraar Media
Home›All War›Somalia›Mareykanka Oo beeniyey iney Dad Shacab Diyaaradihiisu Ku Laayeen Soomaaliya:
Last Updated on December 3rd, 2017 at 07:26 pm
aqalka Pentagon ee looga taliyo ciidamada Mareykanka ayaa beeniyey iney diyaaradihuusu laayeen 10 shacaba isugu jira ciyaal iyo haween , Aug. 25, 2017 dhowaantan tuulada Ba’riire oo kutaala Magaalada Afgooye ee gobolka shabeelada hoose , Ma’aha markii ugu horeeysey ee diyaaradaha Ciidamada Mareykanku laayaan dad shacaba oo aan waxba galabsan, sidookale bilowgii sanadkan ayaa diyaaradaha mareykanku duqeyn ku laayeen 80 kamida ciidamada xooga dalka Somaliya oo ay ku jaraan saraakiil sar-sare oo caana, tirada shacbka ku dhintey duqeynta diyaaradaha Mareykanka ay kawadaan Soomaaliya ayaa waxay gaadhayaan, 971 ruux oo ay ku jiraan ciidamo katirsanaa xoogaga milatariga Dowlada Soomaaliyeed,.
Ehaldii dadkaa lalaayey ayaa dacwad ugudbiyey Maxkamada iyo golaha baarlamaanka Somaaliya iyagoo kudalbanaya in mareykanku mag kabixiyo dadka uu laayey, sidookalena ay mudan yihiin in laga raali galiyo, sidaasna waxaa sheegay Haweeney kamida kuwii eheladoodu duqeyntaa kudhinteen. balse diidmadan qayaxan ee ku aadan shacabka lagu laayey Ba’riire ayaa ah mid dowlada Washington ay xitaa ku dartay liiska Baadhista iyo dabagalka Milatariga ee xarunta milatariga looga arimiyo ee Pentagon
Dhinaca kale Duqaynta diyaaradaha Mareykanku kawado Soomaaliya ayaa ah kuwo ujeedadoodu tahay ladagaalanka ururada argagixisada al-Shabab, iyo al-Qaeda, balse aaney duqaynta cirka ee diyaaradaha mareykanku ilaa iyo hada wiiqin cududa milatari ee Maleeshiyaadka argagixisada. iyadoo ciidamada Milatariga mareykanka kajooga soomaaliya ay tiradoodu gaadheyso ilaa iyo 1500, oo askari taasoo ujeedadoodu tahay ladagaalanka argagixisada iyo tababarka ciidamada xooga soomaaliyeed. iyadoo dowlada Trump ay kordhisay tirada ciidamada kajooga Soomaaliya kadib markii toogasho lagu diley Sarkaal sare oo kamida ciidamada Mariiniska Mareykanka A Navy SEAL. Bishii March ee sanadkan, tan iyo 1993 ee Mashruucii Restore Hop ee diyaaradii Black Hawk lagaga soo ridey ciidan badana lagaga laayey Somaliya Waqtigaas oo uu noolaa Janaral Caydiid.
Sida caadadu tahay Diyaaradaha aaney cidi wadin ee Mareykanka , ayaa falalka eedaha duqeynta shacbiga aan waxgalabsan ayaa waxaa kamida wadamada Iraq Syriya, iyo wadanka Yamen , sadexdii sanadood ee ugu danbeeyey waxay diyaaradaha Mareykanku duqeyn ku laayeen dad tiradoodu kor udhaaftay ilaa iyo 120,000 (boqol iyo labaatan kun) oo kasoo kala jeeda afarta wadan oo soomaaliya kamidtahay ‘